Oktoobar | 2011 | WEEJIDOW
Archive for Oktoobar, 2011
Raisal Wasaare Gaas iyo Raisal Wasaare odinga oo heshiis ku gaaray magaalada Nairobi (Akhriso)
Oktoobar 31, 2011
Waxaa maanta kulan xaasaasi ah ku yeeshay magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya Wafuud ay kala hogaaminayeen R/wasaaraha Soomaaliya Dr C/weli Max’ed Cali Gaas iyo R/wasaaraha Kenya Railla Oding kaa oo ay kaga hadlayeen iskaashiga labada dowladood ee ku saabsan la dagaalanka kooxda Argagixisada ah ee Al-shabaab.
R/wasaare C/weli ayaa waxaa kulankaasi ku wehliyey R/wasaare kuxigeenka ahna Wasiirka Gaashaandhigga Soomaaliya, Mudane Xuseen Carab Ciise, R/wasaare kuxigeen ahna Wasiirka Ganacsiga iyo Warshadaha Mudane C/wahaab Ugaas Xuseen Ugaas Khaliif, Wasiirka Arrimaha gudaha iyo amniga Qaranka Mudane C/samad Macalin Max’uud, Taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed Jenaraal C/qaadir Sheekh Cali Diini iyo Safiirka Soomaaliya ee Kenya Danjire Max’ed Cali Ameeriko.
Sidoo kale R/wasaaraha Kenya waxaa kulankaasi ku wehliyey Wasiirka Gaashaandhigga ee Kenya Max’ed Yuusuf Xaaji, kaaliyaha Wasaaradda Arrimaha dibedda ee Kenya Richard Onyonka, Madaxa ciidamada difaaca ee Kenya Jenaraal Julius karangi, Xoghayaha joogtada ee Xafiiska R.wasaaraha Kenya Dr Max’ed Isahakia, Danjire Nancy Kiriu oo ah xoghayaha gaarka ah Wasaaradda Difaaca ee Kenya iyo xubno kale oo uu ka mid ahaa safiirka dowladda Kenya u qaabilsan Soomaaliya James Mulinge.
Kulankan ayaa waxa uu dabo socdaa heshiiskii 18-ka October ay Muqdisho ku yeesheen wafuud ka socday dowladda kenya iyo madaxda dowladda Soomaaliya oo ku saabsanaa iskaashiga labada dowladood ee dhanka sugidda amniga koonfurta Soomaaliya, iyadoo 21-kii bishaan magaalada Adis ababa lagu soo gabo gabeeyey kulankii 41-aad ee ay isugu yimaadeen madaxda ururr goboleedka IGAD kaa oo lagu taageeray in dowladda Kenya ay ka qayb qaadato howgalka koonfurta Soomaaliya looga sifeynayo Al-shabaab oo dhibaato ka wada Gobolka oo dhan.
Kulanka maanta ay Madaxda labada dowladood ay ku yeesheen magaalad Nairobi ayaa lagu kala saxiixday 11- qodob oo kala ah.
1.	Howlgallada ciidamada Kenya ee Gudaha Soomaaliya waxa uu u jeedkiisu yahay ka hortagga hanjabaadaha kooxda Al-shabaab, ee ah in ay qal qalgelineyso amniga iyo dhaqaalaha dalkaasi, iyadoo dowladda Kenya ay xaq u leedahay in ay isdifaacdo sida uu dhigayo qodobka 51-aad ee xeerka Qaramada Midoobay.
2.	Al-shabaab waa codowga, labada dal ee Soomaaliya iyo Kenya, waxa ayna Qatar ku tahay gobolka iyo caalamka intiise kale, waana in si isku mid ah labada dowladood ay uga hortaggaan dhibaatada kooxdaasi, iyagoo la kaashanaya beesha caalamka.
3.	Howlgalkaan waxaa hogaaminayo ciidamada qalabka-sida ee Soomaaliya, iyagoo taageero ka helaya ciidamada Kenya, si ay bartilmaameedsadaan goobaha ay ku dhuumaaleysanayan Al-shabaab.
4.	Dowladda Soomaaliya waxa ay soo dhaweyneysaa howlgallada ciidamada Kenya ee ay ku taageerayaan ciidamada dowladda Soomaaliya, kuwaasi oo si daris wanaag ah iyo ka mid ahaanshiyaha Midowga Afrika uga qayb qaadanaya howgalkaasi.
5.	Labada dowladood waxa ay isweydaarsan doonaan warbixinada ku saabsan dhaq dhaqaaqyada Al-shaabab, iyadoo la dhisi doono guddi wada jir ah kuwaasi oo si gaar ah uwada shaqeyn doono, islamarkaana kulamo gaar gaar ah ku wada qaadan doono magaalooyinka Muqdisho iyo Nairobi.
6.	Dowladaha Soomaaliya iyo Kenya waxa ay sameyn donaan dib-lomaasiyiin labada dhinac ah kuwaasi oo u ololeynaya taageerada howlgalada bilowga ah, islamarkaana xubno ka tirsan kooxdaasi dib-lomaasiyiinta ah waxa ay kulan 1-da bisha November ku yeelan doonaan magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya, waxa ayna safaro ku kala bixin doonaan caasimadaha labada dal.
7.	Ciidamo dheeraad ah oo ka socda Midowga Afrika ee AMISOM ayaa la geyn doonaa goobaha laga sifeeyo maleeshiyada Al-shaabab ee koonfurta Soomaaliya, si ay u xaqiijiyaan amniga iyo nabadgelyada deegaannadaasi, ayna u caawiyaan maamulada ay dowladda Soomaaliya ka hirgelin doonto Gobolladaasi.
8.	Beesha caalamku waxa ay kaalmo beni’aadanimo oo deg deg ah gaarsiin doontaa goobihii dhawaan laga saaray Al-shabaab, iyadoo sidoo kale deegannadaasi ka hirgelin doonto xarumo caafimaad iyo goobo waxbarasho.
9.	Maxkamadda dambiyada dagaalka ee ICC waxa ay dowladda Soomaaliya ka caawin doontaa baaritaannada shaqsiyaadka dambiyada dagaal geystay ee Al-shabaab ka tirsan, sidii maxkamad loo soo taagi lahaa.
10.	Beesha caalamku waxa ay keeneysaa taageero dhinaca farsamada iyo maaliyadda ee ku aadan xanibaadda isticmaalka dekadda Kismaayo, ilaa iyo inta Al-shabaab laga saarayo dekadda Kismaayo.
11.	Dowladda Kenya marnaba wada xaajood la gelimeyso Al-shabaab, balse dowladda KMG ee Soomaaliya waxa ay u madax banaan tahay in ay wada hadalo la yeelato Al-shabaab, iyadoo laga tixraacayo heshiisyadii Jabuuti iyo kii Kampala oo ay taageereen Urur gobolleedka IGAD iyo Midowga Afrika.
Heshiiskan Asaga oo English ah halkan hoose ka akhriso;
Dowlada Turkiga Oo Dib Usoo Celisay Si Musaafiris Ah Ardeydii Deeqaha Waxbarasho Siisay ”
Dowlada Turkiga oo aad u jecel iney Soomaaliya si walba u kaalmeyso ayna ka go`antahay in ay dhibaatada iyo burburka ka saarto Soomaaliya ayaa waxaa dhacdo in ay kala kulanto marwalba dhibaatooyin badan si ay u kaalmeeso shacabka Soomaaliyeed tan ugu danbeeysey waxa ay ahayd maalmo kahor in ay dib u soo celisey ardey gaareysa 70 wiilal iyo gabdho isugu jira.
Shabakada swsomlia aya warar hoose ka heshay ardeydaan dib lagu soo celiyay ayadoo maalmo kahor aan helney warbixin shegeyse in ardeydii la qaaday wax qori karin iskaba dhaafay in dugsiyada sare dhameesteen.
Ardeydaan oo imtixanaadka ka qadeen saraakiisha wasaaradaa waxbarashada dalka turkiga aya lashegay in la masuq maasuqayey ayadoona ardeydii wax taqaano laga bixiyay magacyadooda kuwa waxbo aqoona lagu soo badalay qaab qabiil.Dowlada Turkiga aya si weyn ula yaaban ardeydaan ayadoona ardeyda dalkooda haatan kusugan ugu caga jugleesay in dib ugu celin donaan gudah dalka soamliya hadii luuqada dalkaas ku baran wayaan muda kayar 6 bilood.
Warka aya sii raacinayo in ardeydaan qaarkod u baxsadeen dalka gariiga si oga sii gudbaan wadamada reer yurub wallow qaarkood haatan ku xiranyihin xabsi guri kuyaalo magalada.
Ugu danbeyntii dowlada madaxweyne shariif ayaa dhex fariisatay ceebtii ugu darneed ayadooan dowlada Turkiga haatan ku caga badneyn wax ka qabashada gudaha dalka soamliya oo dhibaato kala kulmeen wallow balanqaad u sameeyay ra’isulwasaraha Turkiga aysan haatan muuqanin si balan qaadyadaas wax looga qabanaayo.
Wasaaradda waxbarashada Dawlada Turkigu waxay walaac weyn ka muujisay qaabka caddaalad darrada ah ee loo maareeyey deeqihii waxbarashada ee ay sanadkan siisay ardayda Soomaaliyeed, arintaasi oo soo ifbaxday ka dib markii jaamacadihii iyo dugsiyadii sare ee Turkiga lagu arkay dad aan waxba qorin oo sheeganaya heer dugsi sare in ay soo dhameeyeen.
Arday tiradoodu gaareyso 50 arday kana soo jeeda deegaanada Puntland ayaa ku xayiran magaalada Muqdisho ka dib markii laga musuqmaasuqa deeq waxbarasho heer jaamacadeed ah oo ay ka heleen dalka Turkiga.
Ardaydan oo isugu jira wiilal iyo gabdho soo dhameystay dugsiyada sare ee Puntland ayaa soo gaaray Muqdisho bishan Oktoobar horaanteedii si ay qeyb uga noqdaan ardayboqollaal ahayd oo dhamaan gobolada Soomaaliya ka timid kuwaasoo deeqo waxbarasho ay u fidisay dawlada Turkiga.
Qaar ka mid ah ardaydan oo hadda ku sugan Muqdisho ayaa maanta la soo xiriiray xafiiska Raxanreeb ee Muqdisho iyagoo ka cawday in si caddaalad darro ah loogu bedelay boosaskooda dad kale oo shaqo doon ah iyo qaar doonayey inay tahriib ahaan ku tagaan wadanka Turkiga ka dibna ay u baxsadaan wadamada kale ee Europe, sidaasi darteedna iyaga loo sheegay in aan waxba loo heyn.
Arday reer Puntland oo Deeq Waxbarasho laga Musuqmaasuqay oo ku Xayiran Muqdisho.
Ardeydaan waxa ay ahayeen illaa 50 arday oo ka kala yimid Gaalkacyo, Garowe, iyo Boosaaso markii ay Xamar imaadeen ee ay u diyaargarownay safarkii ayaa waxaa dhacay qaraxii 4-tii Oktoobar ee ardayda faraha badan ku dhinteen, markaasi ayaa waxaa dhacayisku dhexyaac ka dibna halkaas baa laga faa’ieystay oo waxaa boosaskoodii la geliyey dad tahriib u socday oo lacago laga qaatay iyagaas baana la siiyey fiisihii”sidaasi waxaa inoo sheegey gabar ka mid ah ardaydaoo codsatay inaan magaceeda la sheegin.
Waxa kale oo gabadhaas inoo sheegtey “Markii aanu u tagnay wasaaradda waxbarashada DKMG waxay noo sheegeen in wasaaradda waxbarashada Puntland ay arinta gali doonto, illaa haddana wax naloosheegay ma ay jirto. Halkaani baanu ku dacdareysanahay oo reerahayagii uga maqanahay…” ayey hadalkeeda ku dartay ardayadaasi oo sheegtay in iyadu dugsiga sare uga baxday magaalada Gaalkacyo.
La arki doone halka ay qabyaald ina geeyso, mudulood iyo mijeerteen ayga ayaa looga fadhiyaa masiirka Soomalida maanta.
Ra’isal Wasaaraha iyo wafdigiisa oo muddo saacado lagu xanibay Garoonka Joma Kenyati Air Port Magaalada Nairobi
Iyadoo wali ay jirto xasaasiyadii iyo murankii beryahan ka taagnaa soo gelitaanka Ciidamada Kenya ee gudaha Soomaaliya ayaa warar soo baxaya ay sheegayaan in Wafdigii shaley ka ambabaxay magaalada Muqdisho ee uu hogaaminayay Ra’isal wasaaraha Soomaaliya Dr. C/weli Gaas muddo saacado lagu xanibay Garoonka diyaaradaha ee Joma Kenyati Airport.
Sida warar ay u heshey shabakada swsomalia, wafdiga Ra’isal wasaaraha ayaa ilaa saddex saacadoo ku xayirnaa qeybta VIB-da garoonka, markii Ciidamada CID ay xanibeen.
Wararka qaar ayaa sheegaya in Saraakiisha qaar ay ku tilmaameen arrintan mid aan lala socodsiin, sidoo kale waxaa jiray inay qabeen mowqifka dowladda soomaaliya ee ahaa inay ka hortimid gelitaanka Ciidamada Kenya, kaasoo tashwiish geliyay xiriirka Dowladdaha Soomaaliya iyo Kenya.
Gudoomiye kuxigeenka baarlamaanka Kenya Faarax Macalin iyo xildhibaano kale oo lagu soo wargeliyay in wafdiga Ra’isal wasaaraha lagu heysto garoonka Joma Kenyati ayaa markii dambe aaday, iyagoo ka soo kaxeeyay.
Wafdiga Ra’isal wasaaraha ayaa waxaa caawa la keenay Hotelka Grand Regancy ee magaalada Nairobi, iyadoo ammaankooda si weyn loo adkeeyay.
Maalinta berri ayaa la filayaa inay la kulmaan Mas’uuliyiinta dowladda Kenya, si ay uga hadlaan arrinta labada dal ee ku aadan howl galka Ciidamada Kenya.
Magaalada Nairobi ayaa caawa si aad ah looga hadal hayaa xanibaada mudada saacadaha ah ee lagu sameeyay Ra’isal wasaaraha markii uu diyaarada ka soo degay, taasoo muujineysa halka ay gaarsiisan tahay hadaladii kululaa ee labada dhinac is weydaarsadeen.
Madaxweynaha soomaaliya Shariif Shiikh Axmed ayaa todobaadkii hore sheegay in aanay aheyn in ciidamo Kenya iska soo galaan, isla markaana dowladda iyo shacabka aysan raali ka aheyn.
Gargaarkii ay Dawladda Iran Shalay Keentay Muqdisho oo Maanta Lagu Arkay Suuqayada Ganacsiga ( Cidaan Maxaa Deeqa )
Warbaahinta DHM Radio ayaa soo ogaatay in raashinkii saarnaa markab waday shixnado gargaar ah kaasi oo ka yimi dalka Iran qaar kamid ah uu maanta soo galay suuqa madow kadib markii la musuq maasuqay.
Raashinkan oo ahaa Bur kaasi oo saarnaa saddex gaari oo ah nooca loo yaqaan N3 ama Isjiidka ayaa saaka lasoo geliyey suuqa weyn ee Bakaaraha halkaasi oo markkii dambe ay gacanta ku dhigeen Ciidamo katirsan Dawladda KMG ah.
Gawaaridaan oo waday raashinka gargaarka ah ayaa la geeyey saldhiga degmada Hawlwadaag halkaasi oo uu iminka ka socdo baaritaan.
Ganacsatada wadatay raashinkaan ayaa sheegay in saraakiil katirsan Dawladda ay raashinkaan kasoo iibsadeen iyaga oo ka cosaday in loogu soo bedelo Bariis ay siiyaan barakacayaasha.
Taliska saldhigga degmada Hawlwadaag oo gawaaridaan xiray ayaa ka madax adaygay dalabka ganacsatada, waxaana uu sheegay in sharciga la horgeyn doono.
Waxaa la rumaysan yahay in inta badan gargaarka ka yimaada dalalka caalamka ee la keeno Soomaaliya la musuq maasuqo, waxaana inta badan lagu arkaa suuqyada magaalada Muqdisho raashinta gargaarka ah oo yaala suuqyada ganacsiga.
Lama oga sida ay yeeli doonto Dawladda Iran oo uu gargaarkaani ugu talagashay in lagu caawiyo dadka Soomaaliyeed ee dhibaaysan.
Sikastaba arrintaan ayaa ceeb iyo bar madow ku ah Dawladda KMG ah oo la sheegay in waxa ragaadiyey hawlaheeda uu kamid yahay musuq maasuqa hareeyey hay’adaha kala duwan ee Dawladda KMG ah.
Dadka Adduunka oo Gaaray 7-Bilyan &- 20ka Wadan ee ugu Horeeya (Warbixin)
\_Sida ay shaacisay hay’adda Qaramada Midoobay u qaabilsan tirakoobka dadweynaha adduunka waxaa maanta oo Isniin ah kuna beegan 31-ka Oktoobar si rasmi ah u buuxsamay tirada dadweynaha adduunka oo gaartay 7 bilyan oo ruux.
Waxaana la sheegayaa in marka la gaaro sanadka 2025 ay tirada dadweynaha adduunka gaari doonto 8 bilyan, Halka qarnigan dhamaadkiisa tirada dadweynaha caalamka ay gaari doonto 10 bilyan oo ruux.
Aqoonyahanada taariikhda ayaa sheegaya in marka dib loo eego kororka dadka adduunka ay xawli ku socotay tan iyo wixii ka dambeeyey sanadkii 1927-kii xilligaasi oo tirada adduunka ay mareysay 2 bilyan. Sanadkii 1959-kii waxay gaartay 3 bilyan.
Waxaa markasta sii kordhayey tirada dadka adduunka iyadoo sanadkii 1974-kii ay mareysay 4 bilyan. Sanadkii 1987-kii 5 bilyan, halka sanadkii 1998-kii ay ahayd 6 bilyan.
Tirakoobka ay faafisay Qaramada Midoobay waxaa lagu xusay in Soomaalida ay gaartay 9.5 milyan. Waxaana dalka Soomaaliya weli ka jira deganaansho la’aan siyaasadeed iyadoo dagaalada, abaaro baahsan oo dalka ku dhuftay iyo shaqo la’aan ay hoos u dhigtay kororka dadka.
Waxa ayna aduunka kaga jirtaa 86 marka loo eego sida loo kala badanyahay.
Labaatanka wadan ee adduunka ugu dadka badan;
Sheekh Aadan Modoowe: Soo Gelitaanka Kenya Waxay Fududeyneysaa Ka Hortaga Shabaab.
Xildhibaan Sheeg Aadan madoowe ayaa sheegey in ay tahay mid loo baahan yahay in ay gudaha dalka soomaaliya ay soo galaan ciidamada dowlada Kenya.
Xildhibaanka ayaa arinkaan ku tilmaamey sidii looga irib tiri lahaa Soomaaliya Al-Shabaab ay tahay tilaabada dowlada Kenya ay soo qaadey loogana baahanyahay in ay shacabka soomaaliyeed ay garab ku siiyaan ciidamada Kenya.
Sheekh aadan ayaa waxaa uu sidoo kale uu sheegey in Al-shabaab soo maleynayso qaraxyo waaweyn oo ay ku fuliso gudaha dalka soomaaliya taas uu ku xilmaamey in ay shabaab u naxaynin shacabka.
Sidoo kale Godooomiyahii hore ee baarlamaanka waxaa uu sheegey in ay shabaab aqawad ku tahay xasiloonida dalka soomaaliya loona baahanyahay in la isku kaashado dalagaalanka Al-shabaab.
Ugu dambeyntii waxaa uu sheegey sheekha in ay soo dhaweyneyaan ciidamada dalka Kenya sidoo kalena kugu baaqey shacabka soomaaliyeed sidii loola dagaalami lahaa shabaabka
Shabaab Oo Ku Doondisey In Ay Jawaab Deg Deg Ah Ka Bixindoonto Arinkii Jilib.
Saraakiisha ugu sar sareysa xarakada al-shabaab ayaa ku doondiyeen in ay jawaab cad ay ka bixin doonaan duqeytii shaley ay geysteen diyaaradaha dalka Kenya.
Waxay shabaab wacad ku mareen in ay meel cidlo ah aysan ugu hari doonin dadkii sheley lagu duqeyay degmada jilib dhiigooda taasina bedelkeeda ay arki doonaan dowlada Kenya.
Weerarka sha ley ay fuliyeen diyaaradaha Kenya ayaa waxaa ku geeriyoodey ilaa iyo 15 halka dhaabaca uu ahaa 60 taas oo ay shabaab ku sheegeen in ay Kenya dan u leedahay baabicinta shacabka soomaaliyeed sida ay hadalka u dhigeen.
Sarkaal Shabaab ah kuna sugan jilib ayaa sheegey in ay kenya ay ka aari doonaan falka ay ka fulisey gudaha soomaaliya shabaabna ay ku fulindoono mid jab weyn uu gaari dowlada Kenya ayuu yiri.
Sidoo kale waxaa uu sheegey sarkaankaan in ay dhulka ku dari doonaan saraha dhaadheer ee ay ku faanaan reer Kenya iyo weliba ayuu yiri in shacabka reer Kenya dhibaato u geysan doonaan.
Waxaa la ogan Karin in al-shabaab ay arinkaan ku ddhabayn doonto walow ay dowlada Kenya ay adkeysay amaanka dalkeeda sida ay suurta gal ugu noqondoonta inay shabaab gudaha Kenya ay ka fuliyaan Qaraxyo.
Gaas Iyo wefdigiisa Oo Kulan La Leh Raisu-wasaaraha Dalka Kenya
Waxaan maalinta magaalada Nairobi ee dalka Kenya kulan ku leh labada ray iisul wasaare ee soomaaliya iyo Kenya.
Kulanka ayaa lagu wada in uu furmo saacadaha soo socdo aydodoo looga hadli doono arimaha ciidamada Kenya ee gudaha u galey soomaaliya iyo sidii jubaayinka shabaab looga saari lahaa.
Shirkaan ayaa ayaa waxaa raisul wasaaraha soomaaliya ku wehlineya wasaaradaha abniga gudaha iyo banaanka waxaan la sheegi karin in ay kulankaan isku waafiqi doonaan iyo in kale.
Shirkaan ayaa imaaneya xili madaxweynaha dowlada KMG Sheikh Shariif uu ka soo horjeystay in ay ciidamada dowlada Kenya in ay sii joogaan gudaha dalka soomaaliya
Duqeyntii Shaley Dadkii Ku Dhaawacmay Oo Xaaladooda Laga Deerinaya
Waxaan xaaladahooda lagu deerineya dadkii shaley ku dhaawacdey duqeyntii ay geesatey diyaaradihii duqeyay degmada jilib.
Dadkii shaley ku dhaawacmay duceyntii demada jiblib ayaa waxaa looqaadey isbitaalo ay ka mid yihiin isbitalka Madiina ee magaalada mogdisho waxaana lagu soo waraneya in dadkaasi ay xaaladooda aad u xuntahay.
Diyaarada ayaa sheley waxay tureen ilaa 3 gantaal oo geysteen qaraao badan oo dhibano iyo dhaabacba leh waxaana geerada ka dhalatey duqeyntra ay gaaraysa ilaa iyo 15 halka dhaabaca uu kor u dhaafeya ilaa 58 qof.
Sidoo kale waxaa la sheegaya in xaley ay geeriyoodeen gaar ka mid ah dadkii dhaawacyada kala duwan ka soo gaarey duqeyntaas, ka dib markii ay xaaladooda ay noqotey mid xalis ah sababteyna in ay halkaasi ku nafwaayaan.
Waa markii ugu horeysey diyaarada ay leeyihiin dowlada Kenya ay dad rayid ah u geestaan qasaaro noocaan ah tan iyo intii ay bilaabeen duqeymada ay shabaab u geysaneyaan.
Ciidamada Dowlada Iyo Kuwa Amisom Oo Wada Qorshe Kula Wareegeya Suuqa Xoolaha
Ciidamada Dowlada KMG Soomaali ayaa saaka wada dhaqdhaqaaq ciidan oo ay ku doonayaan inay hore u sii socdaan.
Xaafada Sos iyp Hiriwaa ayaa lagu soo warameya in ay ciidamada dowlada iyo kuwa Amisom ay ka wadaan Qorshayaal ay ugu duulaan xaafada suuqa Xoolaha ee magaalada Mogdisho.
Xaafada iminka Dhaqdhaqaaqa ka socdaan ayaa waxaa dhowaan gacanta u gashey ciidamada dowlada iyo kuwa Amisom oo shabaab isga baxeen ka dib markii ay dagaal kula kulmeen ciidamadaasi.
Qorshahaan ayaa imaaneya xili dhowaan ay ku fashimeen ciidamada Dowlada iyo Amisom dagaaladii ay ku qaadeen degmada deyniile ee magaalada mogdisho.
Sidoo kale arinkaan ayaa ku ku soo begmeya xili dhega badan uu sheeciyay inay jawaab culus ka bixineyaan weerarkii shabaab ay maalimo ka hor ka geysteen xero jarmarka ee magaalada Mogdisho.
You are currently browsing the WEEJIDOW blog archives for Oktoobar, 2011.